Ọgwụ akpụzi Nsukka na suppliers - China Ọgwụ akpụzi Factory
Akụkụ kachasị mkpa nke ebu ụgbọala bụ ihe mkpuchi mkpuchi. Typedị ụdị ịnwụ a kachasị bụrụ oyi oyi. N’uzo zuru oke, “ebu ebu bu ugbo ala” bu otutu ndi eji ebu ihe eji akoputa ugbo ala nile. Ọmụmaatụ, stamping Ebu, injection ebu, ebu ibe, ebu ebu, ebu ebu, wdg Akụkụ zọpụtara n'ahụ ụgbọ ala na-agbasasị agbasa n'ime mkpuchi akụkụ, doo akụkụ na izugbe zọ akụkụ. Akụkụ ndị nwere ike ịkọwapụta charac ...
Mpempe akwụkwọ akpaaka kwa afọ na-eme ihe dịka 1200 ebu na nkezi, ọkachasị nke ọma na ebu dị n'ime ma na-ajụ, okwu ikpe dị ka ịfụfụ dashboard maka ford, Volkswagen, Benz, the Great Wall na stc. gas-enyere ọnụ ụzọ panel ebu, pụta ìhè na-abụghị akara grille ebu, ala-nsogbu ịkpụzi kọlụm ebu maka jaguar Sanmen base-ekpuchi ebe ndị 36,000 square mita na ihe karịrị 350 ọrụ, na-arụpụta n'elu 600 tent nke Ebu kwa afọ. Ọ dị iche iche ...
Ejiri bumpers n'ihu na n'azụ ụgbọ ala ahụ, ọ bụghị naanị na ọ nwere ọrụ ịchọ mma, mana nke ka mkpa bụ na ha bụ ngwaọrụ nchekwa nke na-amị ma belata mmetụta dị na mpụga, chekwaa ahụ ma chekwaa ahụ na ndị bi na ya. Ihe ndị dị n’ihu na n’azụ bumpers nke ụgbọ ala ahụ bụ nke ọla. A na-eme ka ígwè ọwa a na-acha U site na mbadamba ígwè ndị nwere okpukpu karịa 3 mm, elu ya na-ekpuchi chrome. Ejiri ya ma ọ bụ welded ya na rails, ...
● Igwe ikuku / friji
● Ngwaọrụ usoro
Ngwọta na ịkpụzi maka akụrụngwa ahụike dị ukwuu, akụrụngwa ahụike dị ka MRI, CT na igwe ịgba ọsọ wdg na uru anyị Ogologo Ogo (Ọkpụkpụ & Ọdịdị Ngwaahịa) Mbupu oge (Nkwado Nlele & Ebu Ibu Mfe) Kachasị ọnụahịa Ọrụ (Ọrụ maka Ndị Ahịa, Ndị Ọrụ na Ndị Na-eweta Ọrụ) Sistemụ- U8 ERP management system Routine-Project Engineering Control Document-ISO9001-2008 Standardization-Arụ Ọrụ Nyocha Ndị ọrụ Syste Kaihua na-agbaso "ndị mmadụ ...